Izindawo ezihlanzekile zocingo zibalulekile uma kukhulunywa ngamasaha wocingo namasaha ocingo lwedayimane. Izintambo ezihlanzekile, ezigcinwe kahle kuphela ezikhiqiza ukusikeka okuqondile (isb. Ama-silicon wafers, ama-semiconductors, amaminerali namatshe) ama-ans ahlinzeka ngokusebenza okuphezulu nekhwalithi. I-Ultrasonic inline wire saw saw is the technique ephakeme yokuhlanza ama-wire saw in a inline process eqhubekayo ngaleyo ndlela iqinisekise ukuthi izintambo zihlanzwe unomphela zisebenza kahle ukusika.
Ukuhlanza amaSawing nokusika izintambo nge-Ultrasound
Ngesikhathi sokukhiqizwa kwamabhodi we-semiconductor kanye nama-silicon wafers kanye nokusika izicelo kwezinye izimboni, ama-saw saw kanye nezintambo zokusika zisetshenziswa kakhulu ukusika ama-wafers abe amapuleti amancane. Lezi zingcingo zokusaha nokusika (isb. Amadayimane wensimbi yedayimane, amasaha wensimbi okusanhlamvu) kufanele zigcinwe kahle futhi zigcinwe zingenakho ukungcoliswa ukuze kutholakale ukunemba nokusika okufunwayo. Ngaphezu kwalokho, insingo ehlanzekile noma yokusika kuphela evimbela ukukhubazeka nokulimala kwento esikiwe.
Ukuhlanzwa kwe-Ultrasonic kusetshenziswa ukusebenza ngamandla, amagagasi e-ultrasound asebenza kakhulu, abangela ukuqubuka okukhulu kanye ne-acoustic cavitation, isungulwe njengendlela ethembeke kakhulu yokuhlanzwa okuqhubekayo kwezinto ezingapheli.
I-Hielscher Ultrasonics 'wire saw technology yokuhlanza isebenza ngokugxila kwe-ultrasound nge-sonotrode ekhethekile eyenzelwe (iprosesa le-ultrasonic noma uphondo) enqubweni eqhubekayo yokugezela amanzi. Intambo yokusika noma yokusaha iqondiswa eceleni kwe-sonotrode edlulisa i-ultrasound endaweni esondelene kakhulu ngaleyo ndlela idlula endaweni eshisayo ye-cavitation. Ama-amplitudes aphakeme kanye ne-sonication egxile nge-ultrasonic sonotrode kuqinisekisa ukusebenza kahle okuphezulu futhi kudlula amathangi wokuhlanza we-ultrasonic kude kakhulu. (Chofoza lapha ukuze ufunde kabanzi mayelana nokushoda kwe-cavitation ezindaweni zokuhlanza ze-ultrasonic namathangi!Indawo eshisayo engaphansi kwe-sonotrode ibonakala ngokuxokozela okukhulu, ukucindezeleka kwe-shear, izingcindezi eziphakeme namazinga okushisa nokwehluka okuhlukile kanye namajets amanzi. La mandla amakhulu asusa uthuli, ukungcola kanye nezinhlayiya ezingcolisayo ezintanjeni zokusika futhi azisabalalise kubhavu lwamanzi, lapho izinhlayiya zikhukhuleka khona.
Isikimu sobuchwepheshe besistimu yokuhlanza emgqeni we-ultrasonic ehlanganiswe nomshini we-saw saw
Umdwebo wobuchwepheshe wama-transducers amabili e-ultrasonic I-UIP1000hdT ukuhlanzwa okuqhubekayo kwesaha ledayimane.
Ukuhlanzwa Okuthuthukisiwe Kwama-Wire Saws kanye Nokusika Izintambo nge-Ultrasonics
Ubuchwepheshe bokuhlanza i-ultrasonic bukaHielscher buhlinzeka ngokuthuthuka okukhulu ezimbonini ezisebenzisa izingcingo zocingo (isb. Ukusikwa kwentambo yedayimane) – kufaka phakathi ukusikwa kwesilonda embonini ye-semiconductor kanye ne-photovoltaic. Nge-ultrasonic cavitation, noma yiziphi izintambo zokusika ezinjengezintambo ezifakwe idayimane zihlanzwa kahle kakhulu. Ngakolunye uhlangothi, izintambo zokusika ezihlanzayo ziholela ekusikeni okuhlanzekile. Ngaleyo ndlela kutholakala ikhwalithi ephezulu yomkhiqizo namazinga enqaba aphansi ngesikhathi sokukhiqiza. Ngakolunye uhlangothi, ucingo oluhlanzwe ngokuqinile luyakwazi ukusebenza kumvamisa wokusika ophakeme, ovumela ukusika okusheshayo nokusetshenziswa kohlelo okusebenza kahle kakhulu kanye namazinga aphezulu wokusebenza kahle kokukhiqiza.
Emkhakheni we-photovoltaic kanye ne-semiconductor, ukusika isicwecwe ikakhulukazi izintambo zedayimane kusetshenziswa ngenxa yekhono labo lokusika eliphakeme nokusebenza kahle kanye nokumelana kwalo nemihuzuko. Izinto zokusika ezinjengezicucu ze-silicon (isb. I-monocrystalline silicon) inqubo yokuhlukanisa, edala ukungqubuzana nokushisa. Ngenxa yokushayisana nokugqokwa kwezinto ezibonakalayo, izinhlayiya ezinjengothuli nemfucumfucu zihlala ebusweni bocingo lokusika. Ukungcola okunjalo kungaholela ekusikeni okuqondile, ekulimaleni komphezulu nasekukhubekeni.
I-Ultrasound yaziwa kakhulu ngamakhono ayo ekuhlanzeni izingxenye zensimbi. Kunemigomo emibili yokusebenza. Okokuqala, kukhona ukukhishwa kuketshezi lokuhlanza uqobo olubangela ukunyakaza ketshezi maqondana nezingxenye ezizohlanzwa. Okwesibili - futhi okubaluleke kakhulu - yi-cavitation ebangelwa ama-amplitudes aphezulu. Yomibili le miphumela ye-ultrasonics ikhiqiza ukuhlanzwa okukhulu nokuthembekile kwezinto ezingapheli.
I-Ultrasonic Wire Saw Cleaning ilungele:
isaha yocingo engapheli
ama-saw wire angenamkhawulo
ephindisela ngamasaha ocingo
amasaha anezintambo eziningi
izintambo zokusika ngesivinini esikhulu
amasaha ocingo oluhlanganiswe nedayimane
amasaha e-wire wire
yamadayimitha ehlukene wentambo
Ukusebenza okuphezulu kwe-Ultrasonic I-transducer UIP1000hdT (1kW, 20kHz) yokuhlanza kwentambo ngesaha
Kungani Ukuhlanzwa Kwe-Ultrasonic Kwama-Saw Sawa?
Izintambo zokubona nezokusika zisetshenziswa kakhulu embonini ngenxa yokunemba kokusikeka kanye ne-kerf encane (okungukuthi, ububanzi bokusikwa kwesarha). Kodwa-ke, ukuze uthole lokhu kunemba kokusika, ucingo kufanele lungabi nokungcola ngoba noma yikuphi ukungapheleli okungaphezulu kungadala amaphutha ekusikeni. Ukungcola ikakhulu kubangelwa inqubo yokusika uqobo, okwenza ukuhlanzwa okuqhubekayo kwamasaha ocingo kubaluleke kakhulu.
Inqubo yokuhlanza insimbi yocingo (isb. Insimbi yokusika efakwe idayimane, amasaha ocingo aphezulu) idinga ukuhlanzwa ngempumelelo ngaphandle kokulimaza ingaphezulu lesaha locingo. Noma yikuphi ukulahleka kobukhali kufanele kugwenywe ngenkathi kususwa uthuli nenhlabathi kahle.
I-Ultrasonic inline inline yisixazululo esifanele sokuhlanzwa okuqhubekayo kwamasaha wokunemba we-wire. I-Hielscher ultrasonic inline yokuhlanza amasistimu isusa ukungcola nothuli endaweni yokuxhumana engaphansi, kepha enamandla kakhulu. Isimiso esisebenzayo se-ultrasonic inline yokuhlanza izinto ezingapheli ezifana nokusika izintambo kusekelwe esimweni se-acoustic cavitation. Ama-Hielscher ultrasonic inline inline systems afaka i-sonotrode eklanywe ngokukhethekile, efakwa ebhavini lamanzi. Intambo yokusika idlula i-sonotrode eseduze. I-sonotrode idlulisa ama-amplitudes kubhavu lokuhlanza lamanzi elikhiqiza i-acoustic cavitation. Ukugeza kwamanzi kususa izinhlayiya zokungcola kude; izinhlayiya zingahlungwa kusetshenziswa isihlungi sebhande esikhona ngokuzithandela.
Kusebenza Kanjani Ukuhlanza Kusetshenziswa i-Ultrasonic Cavitation?
I-acoustic cavitation ibonakala ngokunyakaza okukhulu, amazinga okushisa aphezulu kanye nengcindezi kanye nokwehluka okuhlukile kanye namandla e-shear kanye namajets ketshezi. Lawa mandla amakhulu okususa amandla asusa uthuli nokungcola endaweni yokusika yocingo okuholela ekusebenzeni okuphezulu kokuzisika nokunemba.
Ukuhlanza Okungathintwa Kancane: Isarha yocingo ayihlangani namathuluzi wokuhlanza abrasive, kepha esikhundleni salokho ihlanjululwa ngamanzi afuthelweyo nge-ultrasonically. Ngaleyo ndlela, ubuchwepheshe bokuhlanza i-Hielscher ultrasonic buvimbela noma yikuphi ukubhujiswa kwendawo yocingo.
Izinzuzo ze-Hielscher Ultrasonic Cleaning of Cutting Wires and Wire Saws
Ukuhlanzwa kokusebenza okuphezulu
Ukususwa kothuli nokungcola okuyikho
Emgqeni wokuhlanzwa okuqhubekayo
Ukufakwa kokonga isikhala
Kungani Kufanele Ngihlanze Amasaya Wami Wocingo Ngisebenzisa Ukuhlanzwa Kwe-Ultrasonic Inline?
Ngenxa yokuhlanza okusebenzayo futhi okukhulu kumodi eqhubekayo emgqeni, ukunemba okusika nekhwalithi kuthuthukiswe kakhulu:
ukusika okunembe kakhudlwana, isb. amaqebelengwane amancane
ukusikwa kwe-preciser kubangela ukungcola okuncane
isivinini sokusika esisheshayo sivumela amandla aphezulu okukhiqiza ngomshini ngamunye we-saw saw
indawo yokugcwala eyenziwe ngcono
impilo ende yomjikelezo wokusika wocingo / wocingo
ilungele zonke izinto nganoma yisiphi isikali kunoma ikuphi ukukhiqizwa
Izinhlelo ze-Hielscher Ultrasonics 'High-Performance Inline Cleaning Systems
Ngokuya ngamandla wokuhlanza adingekayo, i-Hielscher inikeza ama-transducers e-ultrasonic ngamandla ahlukahlukene e-ultrasonic (isb Uhlelo lwe-200W UP200St noma i 1kW i-ultrasonicator UIP1000hdT) ukuhlanganiswa nemishini yocingo lwensimbi yanoma yiluphi uhlobo. Ama-transducers asebenza ngokusebenza okuphezulu e-Hielscher enza ibanga lezimboni, akhelwe ukusebenza kwe-24/7/365 futhi angaqhutshwa ngokuthembekile ezindaweni ezinzima ngaphansi kwezimo zomsebenzi osindayo wokuhlanza okuqhubekayo kwezintambo ezingapheli.
Ukuba okuguquguqukayo futhi okulula ukusingatha, ama-transducers e-ultrasonic e-Hielscher angafakwa ezinhlangothini ezahlukahlukene nasezikhaleni ezincane. Amasistimu ajwayelekile kanye nama-ultrasonicators enziwe ngokwezifiso ayatholakala ukuze afeze izidingo zakho.
Amamojula wokuhlanza we-Ultrasonic njenge-OEM
Ingabe ungumkhiqizi wezinhlelo ze-saw saw futhi ufuna ukuhlanganisa amamojula wokuhlanza we-Hielscher ultrasonics? Xhumana nathi ukuze uxhumane no-R wethu&D ukuxoxa ngezidingo ezithile. Noma ngabe uhlela ukufakwa ezikhaleni ezincane noma ukufaka i-retro kumasistimu asezintambo akhona, amamojula wethu wokuhlanza ama-Hielscher azofanelana nezidingo zakho.
Sebenzisa ifomu elingezansi ukuxhumana nathi manje! Abasebenzi bethu besikhathi eside abanolwazi bazojabula ukuxoxa ngezidingo zakho zokuhlanza! Sizojabula ukukunikeza imininingwane ejulile mayelana nezinhlelo zethu zokuhlanza emgqeni we-ultrasonic, ukufakwa kwazo kanye namanani.
Isaha yocingo isaha elisebenzisa ucingo lwensimbi noma ikhebula ukusika. Izinsimbi zocingo zisebenzisa isimiso sokusebenza esifana namasaha ebhendi noma ukubuyisela isaha emuva, kepha ngokungafani namazinyo esarha ebhendi noma ukubuyisa amasaha basebenzisa umhuzuko ukusika izinto. Ngokuya ngezicelo ezithile zokusika, i-saw saw ingafakwa izinhlayiya zedayimane noma uthuli lwedayimane njengesiyaluyalu ukuze kwandiswe ukusebenza kahle kokusika nokuthola imiphetho yokusika ebukhali.
Ukusetshenziswa Kwezimboni kanye Nezicelo: Kuzinhlelo zokusebenza zezimboni, ikakhulukazi kusetshenziswa izintambo zocingo nokusika kohlobo oluqhubekayo. Izicelo ezijwayelekile zifaka phakathi ukusikwa kwama-silicon wafers okukhiqiza ama-semiconductors kanye ne-photovoltaics. Amasaya ocingo oluhlanganiswe nedayimane avame ukutholakala ezitolo zemishini ukusika izingxenye zensimbi.